ဗိုက်ခွဲထားတဲ့မေမေယောင်းတို့ ရှောင်ကိုရှောင်ရမယ့်အချက် (၇)ချက် - For her Myanmar
ဗိုက်ခွဲထားတဲ့မေမေယောင်းတို့ ရှောင်ကိုရှောင်ရမယ့်အချက် (၇)ချက်
အခုခေတ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားရတာ မေမေယောင်းတို့အတွက် ကြောက်လန့်နာကျင်ဖွယ်တွေ အတော်နည်းသွားပါတယ်။ ရိုးရိုးမွေးမလား? ခွဲမွေးမလား ? ဘေဘီကြိုက်တာပြော ။ ရိုးရိုးမွေးဖို့ကျန်းမာရေးအရ အဆင်မပြေသူတွေ ၊ နာကျင်မှုဒဏ်ကို စိုးရွံ့လို့ ခွဲမွေးသူတွေများလာတာမို့ ဗိုက်ခွဲမွေးထားတဲ့ မေမေတို့ သိဖို့လိုအပ်တာလေးတွေေပြောပြဖို့ ဟောဒီက ယောင်းတို့ရဲ့ အက်ဒမင် ရောက်လာပါပြီလို့ ။
လူပြောများကြတာတစ်ခုက ” ရိုးရိုးမွေးတာက မွေးတုန်းသာခံရတာ မွေးပြီးရင် လူကောင်းလိုပဲ ရှောင်စရာ သိပ်မရှိဘူး။ ခွဲမွေးရင်အေ လူမမာကြီးကြနေတာပဲ ” တဲ့ ။ ။ အမှန်လည်း ခွဲမွေးတဲ့မေမေတို့ဟာ ရိုးရိုးမွေးတဲ့မေမေတို့ထက် ရှောင်ရန်တွေများပါတယ်။ ဘာတွေရှောင်ရမလဲဆိုရင်
၁) ကျပ်လွန်းတဲ့ အဝတ်အစားတွေရှောင်ပါ။ အဓိက ဝမ်းဗိုက်ကို စည်းလွန်းတဲ့ အဝတ်အစား၊ အတွင်းခံတွေ ၊ ဗိုက်စည်းတွေကို အနာကျက်တဲ့အထိ စောင့်ပြီးမှ ဝတ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အင်္ကျီ ပွပွလှလှလေးတွေကမှ အနာကျက်မြန်စေတာပါ။
Related article>>>ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း ဆံသားကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်းနည်း
၂) အနာကို ခဏခဏ ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ခြင်းမျိုးရှောင်ပါ။ အနာကို မကျက်မှာစိုးလို့ဖြစ်ဖြစ် အနာကို လက်နဲ့ခဏခဏ ကိုင်တွယ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ အလွယ်တကူ ပိုးဝင်စေနိုင်တာမို့ပါ။
၃) လေပွစာ ၊ဝမ်းချုပ်စာရှောင်ပါ။ မေမေတို့ အစားရှောင်စရာမလိုဘူးဆိုပြီး ပြောလေ့ရှိပေမဲ့ လေထိုးစေမယ့် ( ဂေါ်ဖီထုတ် ၊ သခွားသီး) မျိုးကိုတော့ ရှောင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကလည်း ညှစ်အားကြောင့် ဗိုက်တွင်းဖိအားတက်စေတာမို့ ချုပ်ရိုး ‘ဟ’ တာမျိုးလေးတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ရေများများသောက်ပြီး ဘယ်လောက်အလုပ်များများ ဝမ်းပုံမှန်သွားဖို့ အချိန်ပေးပါ။
၄) အလွန်အမင်းရယ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ရှောင်ပါ။ အလွန်ရယ်တဲ့အခါ ၊ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ဗိုက်ကြွက်သားတွေအသုံးပြုရတာမို့ အရမ်းနာကျင်စေပါတယ်။ ရယ်တဲ့အခါ ၊ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ဗိုက်ကြွက်သားလေးတွေကို ထိန်းပေးထားတာက ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
၅) ပစ္စည်းကို ကုန်းမကောက်ပါနဲ့။ ရုတ်တရက်ဆတ်ခနဲ ပစ္စည်းကုန်းကောက်မယ်ဆိုရင် ဗိုက်ကြွက်သားတွေ ဆွဲလိုက်သလိုဖြစ်ပြီး ချုပ်ရိုးတင်းတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပစ္စည်းကျနေရင် ဒူးထောက်ပြီးကောက်တာ၊ တခြားလူကို ကောက်ခိုင်းတာက ပိုစိတ်ချရပါတယ်။
Related article>>>လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်၊လုပ်နေစဉ်နဲ့ လုပ်အပြီးမှာ ရေဘယ်လောက်သောက်သင့်လဲ?
၆) အလေးအပင်မ မ ပါနဲ့။ ချုပ်ရိုးမကျက်ခင် အလေးအပင်မတာက ချုပ်ရိုးကွဲထွက်စေတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ယောင်းတို့ကလေးထက်ပိုတဲ့ အလေးချိန်ရှိတဲ့ ဘာပစ္စည်းကိုမှ မ မပါနဲ့။ ဒီအချိန်မှာ ယောင်းတို့ရဲ့ ကျားကျားတွေကို အပြည့်အဝအားကိုးလိုက်ပါ။
၇) ကျားကျားနဲ့ က်ိစ္စကို ခဏရှောင်ပါ။ ချုပ်ရိုးကျက်နိုင်မယ့် တစ်လခွဲလောက်ထိကို ချစ်ရည်လူးတဲ့ကိစ္စကို ရှောင်ထားစေချင်ပါတယ်။
ယောင်းတို့ရေ ခုပြောသလောက်တွေ ရှောင်ရင်ကို ချုပ်ရိုးမြန်မြန်ကျက်ဖို့ လုံလောက်နေပါပြီ။ ယောင်းတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုတောင်းရင်း
အခုခတျေမှာ ကလေးတဈယောကျမှေးဖှားရတာ မမေယေောငျးတို့အတှကျ ကွောကျလနျ့နာကငျြဖှယျတှေ အတျောနညျးသှားပါတယျ။ ရိုးရိုးမှေးမလား? ခှဲမှေးမလား ? ဘဘေီကွိုကျတာပွော ။ ရိုးရိုးမှေးဖို့ကနျြးမာရေးအရ အဆငျမပွသေူတှေ ၊ နာကငျြမှုဒဏျကို စိုးရှံ့လို့ ခှဲမှေးသူတှမြေားလာတာမို့ ဗိုကျခှဲမှေးထားတဲ့ မမေတေို့ သိဖို့လိုအပျတာလေးတွှေေပောပွဖို့ ဟောဒီက ယောငျးတို့ရဲ့ အကျဒမငျ ရောကျလာပါပွီလို့ ။
လူပွောမြားကွတာတဈခုက ” ရိုးရိုးမှေးတာက မှေးတုနျးသာခံရတာ မှေးပွီးရငျ လူကောငျးလိုပဲ ရှောငျစရာသိပျမရှိဘူး။ ခှဲမှေးရငျအေ လူမမာကွီးကွနတောပဲ ” တဲ့ ။ ။ အမှနျလညျး ခှဲမှေးတဲ့မမေတေို့ဟာ ရိုးရိုးမှေးတဲ့မမေတေို့ထကျ ရှောငျရနျတှမြေားပါတယျ။ ဘာတှရှေောငျရမလဲဆိုရငျ
၁) ကပျြလှနျးတဲ့ အဝတျအစားတှရှေောငျပါ။ အဓိက ဝမျးဗိုကျကို စညျးလှနျးတဲ့ အဝတျအစား၊ အတှငျးခံတှေ ၊ ဗိုကျစညျးတှကေို အနာကကျြတဲ့အထိ စောငျ့ပွီးမှ ဝတျတာအကောငျးဆုံးပါပဲ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အင်ျကြီ ပှပှလှလှလေးတှကေမှ အနာကကျြမွနျစတောပါ။
Related article>>>ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ ကာလအတှငျး ဆံသားကောငျးမှနျအောငျ ထိနျးသိမျးနညျး
၂) အနာကို ခဏခဏ ထိတှေ့ ကိုငျတှယျခွငျးမြိုးရှောငျပါ။ အနာကို မကကျြမှာစိုးလို့ဖွဈဖွဈ အနာကို လကျနဲ့ခဏခဏ ကိုငျတှယျတာမြိုးမလုပျပါနဲ့။ ဒီလိုလုပျတာဟာ အလှယျတကူ ပိုးဝငျစနေိုငျတာမို့ပါ။
၃) လပှေစာ ၊ဝမျးခြုပျစာရှောငျပါ။ မမေတေို့ အစားရှောငျစရာမလိုဘူးဆိုပွီး ပွောလရှေိ့ပမေယျ့ လထေိုးစမေယျ့ ( ဂျေါဖီထုတျ ၊ သခှားသီး) မြိုးကိုတော့ ရှောငျရငျပိုကောငျးပါတယျ။ ဝမျးခြုပျခွငျးကလညျး ညှဈအားကွောငျ့ ဗိုကျတှငျးဖိအားတကျစတောမို့ ခြုပျရိုး ‘ဟ’ တာမြိုးလေးတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ရမြေားမြားသောကျပွီး ဘယျလောကျအလုပျမြားမြား ဝမျးပုံမှနျသှားဖို့ အခြိနျပေးပါ။
၄) အလှနျအမငျးရယျခွငျး၊ ခြောငျးဆိုးခွငျး ရှောငျပါ။ အလှနျရယျတဲ့အခါ ၊ခြောငျးဆိုးတဲ့အခါ ဗိုကျကွှကျသားတှအေသုံးပွုရတာမို့ အရမျးနာကငျြစပေါတယျ။ ရယျတဲ့အခါ ၊ခြောငျးဆိုးတဲ့အခါ ဗိုကျကွှကျသားလေးတှကေို ထိနျးပေးထားတာက ပိုအဆငျပွစေပေါတယျ။
၅) ပစ်စညျးကို ကုနျးမကောကျပါနဲ့။ ရုတျတရကျဆတျခနဲ ပစ်စညျးကုနျးကောကျမယျဆိုရငျ ဗိုကျကွှကျသားတှေ ဆှဲလိုကျသလိုဖွဈပွီး ခြုပျရိုးတငျးတာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ပစ်စညျးကနြရေငျ ဒူးထောကျပွီးကောကျတာ၊ တခွားလူကို ကောကျခိုငျးတာက ပိုစိတျခရြပါတယျ။
Related article>>>လကေ့ငျြ့ခနျးမလုပျခငျ၊လုပျနစေဉျနဲ့ လုပျအပွီးမှာ ရဘေယျလောကျသောကျသငျ့လဲ?
၆) အလေးအပငျမ မ ပါနဲ့။ ခြုပျရိုးမကကျြခငျ အလေးအပငျမတာက ခြုပျရိုးကှဲထှကျစတေဲ့ အကွောငျးတဈခုပါပဲ။ ယောငျးတို့ကလေးထကျပိုတဲ့ အလေးခြိနျရှိတဲ့ ဘာပစ်စညျးကိုမှ မ မပါနဲ့။ ဒီအခြိနျမှာ ယောငျးတို့ရဲ့ ကြားကြားတှကေို အပွညျ့အဝအားကိုးလိုကျပါ။
၇) ကြားကြားနဲ့ ကိစ်စကို ခဏရှောငျပါ။ ခြုပျရိုးကကျြနိုငျမယျ့ တဈလခှဲလောကျထိကို ခဈြရညျလူးတဲ့ကိစ်စကို ရှောငျထားစခေငျြပါတယျ။
ယောငျးတို့ရေ ခုပွောသလောကျတှေ ရှောငျရငျကို ခြုပျရိုးမွနျမွနျကကျြဖို့ လုံလောကျနပေါပွီ။ ယောငျးတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတှနေဲ့ ပြျောရှငျပါစေ ဆုတောငျးရငျး
Tags: baby, birth, do, Health, Knowledge, normal birth, section, Water
မှန်ကန်တဲ့အလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ပြန်မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်း(၃)ခု
Yin Sandi Ko April 8, 2019